Top 20 Adobe jilitaankii tuuryo waxaad isticmaali doontaa
Inkastoo ay gacanta ku mouse caadiga ah wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u qabtaan shaqo kasta oo jilitaankii waa awood, u aalada hufan tuuryo keyboard ee aan laga badin karin. Waxaan dhamaanteen ka duwan wax yar ka shaqeeyaan, oo nasiib wanaag Adobe fahamsan yahay in, si kastoo ay halkan waxaan uu diirada saari doono oo ku saabsan qaabka keyboard caadiga ah, tuuryo keyboard la beddeli karaa in ay wax aad rabto iyo badbaadiyey sida profile caado, waxaa jira xataa presets mar hore ka mid ahaa u laxamiistaha AVID Media oo Final Cut Pro kuwa laga yaabaa gudbaysa baakadaha kuwa ama kaliya door bidaan sida ay u shaqeeyaan.
Taana waxaa lagu gaarayaa iyada oo maraya edit Jidka> tuuryo keyboard sida hoos ku qoran:
Ka hor inta aan talaabo u geliyey tuuryo ugu waxtarka badan, qoraalka kooban halkan ku dhufto ee kala duwan, inkastoo aan hubaa in akhristayaasha ugu waa ay ka warqabaan ahay. PC iyo Mac versions of software samayn la digtoonyey ka mid ah in meesha PC isticmaalo xukunka Control iyo Alt, Mac uu leeyahay halkii furayaasha Command iyo Xulashada wadaagaan tuuryo aasaasiga ah isla. Kale oo ka duwan in ka shaqeynayaan waa isku mid. Waxaan ka mid doonaa tuuryo ee labada dhufto ee la walba si ay u sameeyaan referencing fudud.
1. Dooro Window
Waxaan laga bilaabo this mid ka mid fudud sababtoo ah waxaan ka helaysaan ugu isticmaali ah oo dhan, gaar ahaan haddii aniga oo kale aad jeceshahay Qaabka caado u daaqadaha oo dhan ah. Haddii monitor barnaamijka qarsoon yahay, tusaale ahaan, kaliya aad u riixi kartaa wareeg + 4 oo halkaas ku yahay. Tuuryo waa isku mid labada halkan dhufto.
Audio clip Shift fiicni + 9
Audio Shift Track fiicni + 6
Kontoroolha Saamaynta wareejin + 5
Raadka wareejin + 7
Shift Browser Media + 8
Monitor Barnaamijka Shift + 4
Shift Project + 1
Jadwallada wareejin + 3
Inkastoo tuuryo ee sixiddiisa iyo marin-habaabinayaan clips yihiin mid aad u muhiim u ah aalada hufan, waa in la xusuustaa in kuwa la xiriira hawlgalka aasaasiga ah ee barnaamijka waa sidii waxtar leh, sida aan halkan ku arko. Isticmaalka Control iyo I (Command oo aniguna Mac) isla kor u soo Bixiyaa wax sanduuqa wadahadal warbaahinta dejinta.
Panel 3. Ciidamada
Waxaa jira tuuryo badan oo loo isticmaali karo gudahood guddi qabashada, laakiin sababtoo ah waa arrin noocan ah iyo dhabta ah ee aalada jilitaankii, isagoo soo galo mashruuca loogu talagalay saxaafadda oo dhan, waxaanan u malaynayaa in tuuryo la heli karo oo dhan waa sida qiimaha leh sida mid kasta oo halkan kale.
Dul Iyada Fields - Tab
Cancel Ciidamada - ESC
Dib u socon - R
Tag In Point - S
Tag Out Point - W
Jooji - S
Tallaabada Back - Arrow Left
Tallaabada Forward - Xuquuqda Arrow
4. Jadwalka Panel
In xididka la mid ah Panel qabashada, Panel Timeline uu leeyahay tiro tuuryo gaar ah dhammaan hawlaheeda asaasiga ah, iyo waa lagama maarmaanka u ah aalada dhakhso ah.
Clear tago iyo mooraal - G
Clear In Point - D
Tag In Point- Q
Jire Kulanka - M
Bilow iyo Jooji - Spacebar
Play Speed ​​Normal - L
Play beddeli Normal Speed ​​- J
Calan In Point - Waxaan
Xusan Point - o
Jar - T
Ellipse Tool - E
5. Navigation gudahood clip ah
Tani waxay la mid ka shaqeeya gudaha daaqadaha monitor barnaamijka / waqtiga ama il monitor, hubiyo in mid ka mid ah la doonayo waa firfircoon hore dabcan. Waxaad kartaa inaad u guurto ah code waqti gaar ah gudahood clip ah, ama horey ama gadaal tago tirada set lugahooda iyadoo la isticmaalayo suufka tirada a. Si ay u tagaan si ay u code waqti gaar ah oo si fudud ku qor in pad tirada. Si aad u safri tiro go'an loox ah oo si fudud ku qor + ama - (si u tilmaamay jihada) iyo tirada lugahooda.
6. Calaamadaynta Clips
By fog habka ugu fudud si ay u xusaan clips waa in la isticmaalo toobiye keyboard ah.
Wixii clips sixitaanka isticmaali X, halka sixitaanka xulashada waa /.
7. In iyo Out
Waxa intaa dheer in sixitaanka clips via tuuryo, sidoo kale waa u fudud si ay u xusaan In iyo Out dhibcood sidan.
Si Mark In aan isticmaalo, halka si ay u xusaan Out isticmaalka O.
Si cad toobiye waa Control + Shift + waan u PC iyo Xulashada + waan u Mac.
Si aad u nadiifiyo Control + wareejin + O u PC, Option + O u Mac.
8. ciyaaro Clips
In gacanta gacanta ku tuur ah Sameynta sixitaanka, waa amarradii keyboard ciyaaro clips ah. Kuwani waa:
Play In si Out: Xakamaynta + Shift + Space (PC) iyo Xulashada + K u Mac
Clear In iyo Out: Xakamaynta + Shift + X (PC) iyo Xulashada + X u Mac
Play Qiyaastii: isku mid ah labada dhufto oo waa wareeg + K.
Si aad u hesho ugu fiican tan ay lagama maarmaan tahay in la dhigay qaar ka mid ah fursadaha hore, sida Play Qiyaastii ciyaara qayb ka mid ah waqtiga ku wareegsan Playhead ah, iyo meesha ay u ciyaara waxa ay ku xidhan fursadaha dhigay. Taas waxa loo sameeyaa iyada oo menu via edit> doorbidida> loo maqli karo, halkan waxaan ku leeyihiin preroll iyo postroll qarka u saaran inuu 4 seconds, taasoo la micno ah in ay u ciyaara 4 seconds ka hor iyo ka dib heer ay playhead lagu meeleeyo.
Intaa waxaa dheer, jeestay on Nagatimo, waayo, taasu waxay kaa caawin karaan in ay itusi hufay.
9. Toggle Audio Inta lagu guda jiro u xoqdo
Waxaa jira waqtiyo laga yaabaa in aad rabto in aad ku maqli audio markii rugiddu, si kastaba ha ahaatee waxaa deminta yeelan karaan saamaynta faa'iido waxqabadka hoose kombiyuutarada dhamaadka. Toobiye ayaa u geedi socod dhib yar loo damiyo iyo sida looga baahan yahay ka dhigaa.
Toobiye waa Shift + S labada dhufto.
10. Slide clip ah gudahood isku xigxiga
Waxaa jira labo ka mid ah fursadaha aad heli karto halkan ka tuuryo ah, simbiriirixan mid jir ama 5 loox.
Si aad u simbiriirixan loox bidixda waa Alt +, u PC ama Xulashada +, u Mac. In la kordhiyo ilaa shan looxyada ku dari Shift si toobiye midkood.
Si aad u simbiriirixan loox inay xaq yahay Alt +. u PC iyo Xulashada +. u Mac. Mar kale, in la kordhiyo ilaa shan looxyada ku dari Shift.
11. ay simbiriirixan gudahood isku xigxiga
Sida fursadaha slide ah, doorashada waa mid ka mid jir ama shan loox.
Si ay simbiriirixan loox bidixda waa Control + Alt + Left u PC ama Xulashada + Command + Left u Mac. In la kordhiyo ilaa shan looxyada ku dari Shift si toobiye midkood.
Si ay simbiriirixan loox inay xaq yahay Control + Alt + Xaqa u PC iyo Xulashada + Command + Xaqa u Mac. Mar kale, in la kordhiyo ilaa shan looxyada ku dari Shift.
Waxaad dhaqaajin karin clip ah kor ama hoos fudud oo isticmaalaya kor iyo hoos falaaraha, halka haysta Alt ama Xulashada waqti isku mid ah oo kuu ogolaanaya inaad si ay u doortaan kaliya video ama maqal ah in ay u guuraan.
13. Multi Camera Selection
Tani waa qalab kuu ogolaanaya inaad si ay ula xaglo camera kala duwan ee isku maadada ama goobta shaqeeyaan. Si aad u kala bedesho kamaradaha kala duwan si deg deg ah waa mid aad u faa'iido badan oo kaamil ah la leh xukunka tiro.
Numbers 1 ilaa 9 dooro camera u dhigma.
14. Ku dar edit ah
Doorashadan waxa dhimaysa track (ama raad) kuwaas oo lagu. Toobiye ayaa waayo, kanu waa Control + K ama Command + K.
Waxaad ka arki kartaa oo dhan itusi daray gudahood isku xigxiga oo ay xulashada show dhex itusi gudahood menu xigaan.
15. Ku dar guurka caadiga ah
Doorashadan waxa uu khuseeyaa guurka default dhammaan warbaahinta la doortay ee. Si taas loo sameeyo isticmaalka Shift + D this.
Jire 16. Kulanka
Helidda jir gaar ah gudahood isku xigxiga ee ku daray in clip labaad waa aad u faa'iido badan, toobiye waa M, timesaver weyn.
17. Zoom si isku xigxiga
In ay awoodaan in ay ku Mozilla waa weyn, waxa ay taasi ka shaqeeya guddi isku xigxiga ee inta badan ka sahlan, ugu yaraan ii, si kastaba ha ahaatee khasaare mid ka mid ah ayaan heli waa in aan u muuqdaan in ay ku lumen raadinta clip gaar ah. Isticmaalka / fursad kuu siinayaan in si deg deg ah Mozilla maqnaan navigation oo dib ugu soo laabtay mar kale shaqada
18. U bood Edit
Sida looga gudbo laga edit in xaalkaa waa hab aad u sahlan oo ay la-tuur ee aad heli karto.
Ilaa Page aad qaadanayso in edit dhibic hore, halka bogga hoos aad qaadanayso in la soo socda.
Iyadoo dhaqanka tuuryo noqdaan nooca labaad oo aad ka heli doonaa aalada noqdo oo keliya ma aha, laakiin si dhakhso ah howlgal macaan iyo weliba.
19. Toggle nooca goo loo isticmaalo
Si dhakhso ah isu dhex Standard, udhaqaajiyaa iyo Roll noocyada goo.
Wareeg + T u PC, Control + T u Mac
20. udhaqaajiyaa goo
Tani waxay aad u saamaxaaya in ay jar madaxa ama dabadu ee clip aad si deg deg ah, samaynta aalada aad u hufan. Si aad u jar edit soo socda isticmaalka Playhead ah W, u edit hore ka Q. isticmaalka playhead ah
> Resource > Video > Top 20 Adobe jilitaankii tuuryo waxaad isticmaali doontaa Marka ayeey Video Files